10 Nzvimbo Dzakanakisisa Dhivha MuNyika | Save A Train
musha > Kufamba Iceland > 10 Nzvimbo Dzakanakisisa Dhivha MuNyika
Mukudzika kwegungwa, yakavanzwa kure nebudiriro, uye isina kubatika nenguva, ndivo 10 nzvimbo dzakanakisisa dzekudonha pasi. Kubva pane yakajeka uye yakajeka coral matombo kusvika kuWWII ngarava dzinoparara, hupenyu hwemugungwa hwemusango, nemakomba ebhuruu, Gadzirira dhivha yako giya nekuti ino diving chikamu chave pedyo nekunakidza zvakadaro.
1. Yakanakisa Dhi Saiti MuChina: Iyo Great Wall
10 mamirioni evashanyi anoenda kuGreat Wall yeChina gore rega, asi vashoma kwazvo vanoziva kuti vanogona kukasva dive mune imwe yenzvimbo dzinoyevedza pasi rese. Ipo vanhu vazhinji vachifamba vachitevedza madziro e21o00, kutora mifananidzo yemagariro enhau, Panjiakou Reservoir inzvimbo yepasi pemvura yekudonha. Iyo Great Wall yeChina ndiyo chete Kushamisika kwePasi, unogona kunyatsopinda mukati.
Zvinogona kunge zvisinganakidze uye zvakanaka sekudonhedza muIndonesia kana Fiji, asi iwe unozonyatsodzoserwa nekutarisa kweGreat Wall yeChina. Kwete kungoyemura zvakatenderedza kubva kumusoro, asi ndichizviwana kubva pakutanga, kubva pazvidhinha zvichikwira, chimiro chakamira chakamira kwezviuru zvemakore, kupona njodzi dzechisikigo, madzimambo, uye shanduko dzezvematongerwo enyika.
Yakanakisa Nguva yekuDhivha:
Kutyaira iyo Great Wall muChina chiitiko chakaoma kunyangwe kune vakasiyana siyana. Chikonzero iko kwakadzika tembiricha, kusvika pahuwandu hwe 10 kusvika 11 ° C, pa 7 mamita akadzika muzhizha. saka, iyo yakanakisa nguva yekudonha muGreat Wall ndeye chete kana iwe wanyatsogadzirira. Chimwe chinodikanwa chiri huwandu hwakazadzikiswa hwe 100 kuti 200 inosvetukira kune varaidzo vakasiyana.
2. Yakanakisa Dhi Saiti MuUK: Wales
Nemapako, 500 wrecks, uye hupenyu hwakajeka hwegungwa, iwo mahombekombe ewaresi inzvimbo inoshamisa yekutamba. Pano iwe unogona kukwira kune anopfuura makumi mashanu emamvura mumvura yeSkomer, uye Skokholm, uye Middleholm zviwi. Kuonekwa kwacho ndeimwe yeakanakisa munzvimbo, ichikubvumidza iwe kuyemura hwakajeka hupenyu hwegungwa uye kuona WWII inoparara kana iwe uri munhoroondo.
Zvisinei nemaonero ekurara ane, Wales ndiyo inonakidza nzvimbo yekudonha muEurope. Semuyenzaniso, Skomer Marine Reserve muPembrokeshire ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudonha muWales: catfish, dolphins, slugs yegungwa uye seahorses, ingori mashoma ezvisikwa zvegungwa zvaunosangana nazvo.
3. Yakanakisa Dhi Saiti MuItari: Portofino
ne 20 nzvimbo dzakasiyana dzekudonha, Portofino inopfuura a guta rinoyevedza regungwa muEurope. Mukuwedzera kune inofadza dzimba dzemataundi, mumaresitorendi, uye mahombekombe, iyo Ligurian pamhenderekedzo inonakidza diving saiti muEurope.
Chekutanga, iyo Portofino Marine Reserve inopa zvinoshamisa matombo uye kupwanya kwevanotanga uye vemberi vakasiyana. chepiri, chifananidzo chaKristu, Kristu weGomba rakadzikadzika ndiye mumwe wepamusoro 5 nzvimbo dzekudonha muPortofino. Last, asi kwete muduku, yeCanada MOHAWK deer wreck ndeimwe kukweva kwekudonha pa 20-40 mamita.
Kupedza, Nzvimbo dzePortofino diving dzakanakira yako yekutanga kudhizaina, uye kuona chimwe chinoshamisa kushamisika kwepanyama kana iwe uine ruzivo rwekuchinja.
Milan KuPortofino Nechitima
Venice KuPortofino Nechitima
Florence KuPortofino Nechitima
Turin KuPortofino Nechitima
4. Yakanakisa Diving Saiti MuFrance: French Guadeloupe Islands
Muparadhiso yeCaribbean, the la Guadaloupe zviwi chidimbu chidiki cheFrance yekudonha kudenga. Iri boka diki rezvitsuwa rine La Grande Terre, uye Petite Terre, kumba kugomo, sango rinonaya, nzvimbo dzakanaka uye mahombekombe, uye zvakanyanya kukosha ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudonha muEurope.
Zvitsuwa zveGuadeloupe hazvizivikanwe seBali kana Belize, asi hupenyu hwemugungwa pano hunonyatso kukuchengetedza pasi pemvura kuzororo rako rese. Cousteau Marine Reserve ndiyo yakanyanya kunaka diving saiti kuGuadeloupe, ine mhuka dzakanaka uye nemiti, tunnels, mapako hamba, uye akawanda akawanda akavanzwa mavara eanofarira diver, uye kune vekutanga-nguva vanongoda kunakirwa nehupenyu hwegungwa mumvura dzeCaribbean.
Iyo Yakanakisa Nguva yekuDhivha MuGuadeloupe Islands:
Iyo tembiricha yemvura inoramba iri 23-28 ° C gore rese kutenderera kuGuadeloupe, saka unogona kuuya kudhivha pese paunoda.
Pamusoro pemasango manyoro, zvikomo, uye makomo, iyo Orkney Islands ine yakanakisa nhoroondo yegungwa pasi rese. chaizvoizvo, pane 7 ngarava pazasi pemvura yeOrkney muScotland. Izvi zvinoputsika kubva kuGerman High Seas Fleet muScapa Flow, mu 1919.
Mukuwedzera kune zvinoputsika, kune zvinoshamisa mhuka dzemusango dzinoongorora mumvura yakachena. Semuyenzaniso, iyo mvura yeChurchill Zvipingamupinyi uye Yesnaby kana Inganess akakosha ekuona hupenyu hwesango hwegungwa.
Iyo Yakanakisa Nguva yekuDhiva MuOrkney Islands:
Isita kusvika Mbudzi, kana tembiricha iri 13 ° C.
6. Nzvimbo Dzakanakisisa Diving muEurope: Silfra, Aisirendi
Pakati pemakondinendi maviri, mumwoyo wa Thingvellir National Park, iyo yakajeka mvura muIceland inomirira iwe kune inoshamisa diving chiitiko. Iyo yakasarudzika geological maficha muSilfra inopa asinganzwisisike tunnels uye mapako evanoziva akasiyana.
Chinhu chinonyanya kufadza nezve kudhiraivha muSilfra ndiko kuputika. Iyi nzira yekudonha yakaumbwa neyegore 2 cm kufamba kweNorth America uye maEurasia tectonic mahwendefa. Izvi zvakatanga kugadzirwa mushure mekudengenyeka kwenyika, asi yakachengeteka zvachose kudhivha mazuva ano, saka iwe unogona kutanga kugadzirira isingakanganwike diving chiitiko mumvura yeIcelandic.
Iyo yakakwira kudhivha yakadzika inobvumidzwa muSilfra iri 18 mamita.
7. Nzvimbo Dzakanakisisa Dhivha MuNyika: Bali
Mahombekombe ane jecha akakomberedza, temberi, makomo anoputika, mvura yemashiripiti Bali inoshamisa pasirese pachezvayo. Hapana mubvunzo, Bali inzvimbo yakanaka yezororo uye yakakwana kudhizaina.
MuBali, unogona kupatsanura nguva yako pakati penzvimbo dzakawanda dzekudonha nekuti dziri kwese kwese. Kubva pane yakajeka coral reefs kune hofori hove, uye mapako kune akachema-fema Buddha zvifananidzo, Bali pasi pemvura inonakidza uye inoshamisa nyika yekutamba uye snorkeling.
Iyo Yakanakisa Nguva yekuDhivha MuBali:
Chivabvu kusvika Mbudzi inguva yekudonha muBali, uye nguva yakanakisa yekuona Manta Rays ndiApril kusvika Chivabvu.
8. Nzvimbo Dzakanakisisa Dhivha MuNyika: Iyo Blue Hole MuBelize
125 mamita yakadzika, yakatenderera muchimiro, uye nemaonero anoyevedza emuchadenga, iyo Blue Hole diving saiti muBelize, mumwe kumusoro 10 inofanirwa kudhizaiza masaiti pasi. Iri hofori gomba rakanangana neLightouse Reef muBelize, uye pakuonekwa kwakanaka, unogona kuzviwana uri pane isingakanganwike dhiri yekushanya.
Kusiyana nedzimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekudonha pane yedu runyorwa, iyo Blue Hole haisi imba yezvivezwa zveBalinese, husingawanzo hupenyu hwegungwa, kana mavara ane mavara. Izvo iwe zvaunowana zvinonetsa uye zvinogutsa diving chiitiko, izvo zvinokutora iwe kuenda kunotevera divemaster nhanho.
Iyo Yakanakisa Nguva yekuDhivha MuBlue Hole:
Kubvumbi kusvika Chikumi kwakanakira whale shark kutarisa uye kudhizaina.
9. Raja Ampat |: Kudhiraivha Pakupera Kwenyika
Yakachengetwa kure nebudiriro kusvika 2004, Raja Ampat iparadhiso yakavanzwa, iri pakati peIndonesia neAustralia. Kutenda kune uku kunonoka kuwanikwa, mhuka dzesango dzemugungwa muRaja Ampat ndeimwe yemusango pasi rose.
Paunodhiraivha muRaja Ampat, iwe uchaona pamusoro 600 mhando dzekorari dzakaoma chete, kuwedzera kune yakajeka uye kunze-kweiyi-yepasi- hupenyu hwegungwa. Iyi nyika yakasarudzika iri pakati pe 4 zviwi zvikuru: Waigei, Batanta, Salawati, uye Misool kuWest Papua iri kure.
Kana iwe uri wepakati nepakati kune epamberi diver, ipapo iwe unofanirwa kunyatso booker rako rinotevera rekudonha zororo muRaja Ampat.
Yakanakisa Nguva yekuDhivha MuRaje Ampat:
Mbudzi kusvika Kubvumbi pamwe nekupisa kubva 27 kuti 30 ° C.
10. Nzvimbo Dzakanakisisa Diving muChina: Shi Cheng Guta Rekare MuQiandao Lake
Yakadzika mune chiuru Islands Islands, mudunhu reZhejiang, ari guta rekare weShi Cheng anonyepa. Pakadzika kwe 40 mamita, iwe uchaona izvo zvinoshamisa zveakarasika Chinese guta. Zvisinei nemvura inotyisa uye nguva yakapfuura, zvivakwa zveguta, uye kunyange huni hwehuni hwakachengetedzwa zvakanaka.
Nezvikonzero izvi, guta reShi Cheng iparadhiso yakavanzwa kune vakasiyana siyana. Vazhinji vanouya kuzowana runako rweQiandao Lake, asi guta rakarasika iri chimwezve chikonzero chinoshamisa chekufamba. Guta nemupata zvakazara mukati 1959, asi zvakachengeteka zvachose kudhizaina.
Iyo Yakanakisa Nguva yekuDhivha MuShi Cheng:
Kudonha, kuvonga kune yakaoma uye inodziya mamiriro ekunze.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki kuenda ku 10 nzvimbo dzakanakisisa dzekudonha munyika nechitima.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "1o Yakanakisa Kudhiza Sites MuNyika" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-diving-sites-world%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
AkiraNoLife sddvs.tdddddv.dec.id bestdivingsitesworldwide svetuka kudhizaivha DivingSites DivingVacation MarineWildLife ScubaDiving SeaLife